साहुको ऋण तिर्न नसकेपछी, आफ्नो यौवन यसरी बेचिन यी युवतीले ( भिडियो सहित) - Social Video Khabar
साहुको ऋण तिर्न नसकेपछी, आफ्नो यौवन यसरी बेचिन यी युवतीले ( भिडियो सहित)सधैै चर्चामा रहिरहने हलिउड स्टार माइली सायरसले पछिल्लो पटक फेरी चर्चामा रहिन । एक टुरको क्रममा उनले आफ्ना फ्यानहरुलाई एक सनसनीपुर्ण अफर दिइन ।
अफरअनुसार कसैले पनि ९०० डलर तिरपछि माइलीसँग किस गर्न र उनको स्तनमा हात राख्न पाउदथे । त्यतिमात्र हैन फ्यानले यो सबैलाई क्यामेरामा कैदसमेत गर्न पाइन्थ्यो । माइलीले उक्त अफर दिनेबित्तिकै एक फ्यानले खुशी साथ ९०० डलर तिरे र माइलीको स्तनमा हात राखी तस्वीर खिचाए । डेभिड नामको उक्त फ्यान माइलीलाई चुमेपछि निकै खुशी देखिएका थिए ।
तस्वीरमा यी सबै हेर्दा माइलीको स्तनमा स्पर्श गरेजस्तो देखिन्छ । तर वास्तवमा यो एक पोज मात्र हो । माइली आजभोली वल्ड टुरअन्तर्गत लगातार विभिन्न स्थानमा शो गरिरहेकी छिन ।
नेपालमा बेरोजगारको समस्याको कारणले नेपाली युवाहरु बिभिन्न देशहरुमा अाफ्नो घरपरिवार लाई चट्क्कै छोडेर उज्वल भविश्यको ठुलो सपना बोकेर रोजगारीको लागी बिदेश जान बाध्य छन ।
यस्तै, मोरङ्ग जिल्ला बोक्रे एक्लाजुंग गाउँपालीका ३ का डम्मर मगर पनि रोजगारको लागी खाडीमुलुक दुबाई (युएई) गएका थिए, ४ वर्ष पछि घर फर्केर पुन उनि कुवेतमा ३ वर्ष काम गरेर हाल मलेशियामा परिवार र अाफ्नो उज्जवल भविश्यको निम्ति कडा मेहनत गर्दै अाएका छन ।
यतिकैमा डम्मर मलेशिया गएको ५ महिना भर्खर भएको छ भने उता उनको श्रीमति सबिना लिम्बु मगर बर्ष २४ कि पौस ९ गते अाईतबार सानो ३ बर्षको छोरा घरमै छोडेर मोरङ्गको उर्लाबारि बहिनीको घर जान्छु भनि बिभिन्न झुटो कुरा गरेर घर देखी निस्किएकी थि ईन ।
तर उनि उर्लाबारि पुगेकि छैनन, कहाँ गईन, के गर्दैछन अत्तोपत्तो छैन, अाफन्तहरुलाई फोन गरि बुझ्दा पनि कतै नभेटिएको डम्मरले जानकरी दिए ।
उनि घर देखी निस्किदा उनका श्रीमान डम्मर मगरले कमाएको करिब ५ लाख नगद र ५ तोला सुनको गहना सहित बेपत्ता भएको उनको श्रीमान डम्मरले जानकारी दिएका छन् ।
सबिनालाई भेट्नु हुने महानुभावहरुले तल उल्लेखित फोन नं. मा सम्पर्क गरेर वहाँ लाई सहयोग गर्न श्रीमान डम्मरले आग्रह गर्नु भएको छ ।
श्रीमान डम्मर भन्छन ‘मैले पसिना बेचेर कमाएको एक-एक हिसाबको न्याय पाउनु पर्छ’ ।
Prev११ वर्ष कान्छी विदेशी श्रीमती पाउदा सन्जु मख्ख, यसरी बस्यो माया (पुरा भिडियो)
Nextहैट, क्या खत्रा भिडियो ! नहेरे पछुतो-(भिडियो सहित)
जानी राख्नुहोस – पुरुषमा यस्ता ११ गुण भएमा महिला यसरी हुन्छन हुरुक्कै ! (हेर्नुहोस भिडियो)
नाठो संग मस्ती गर्न आफ्नै श्रीमानको हत्या गरिन यी महिलाले (भिडियो हेर्नुहोस)